UNSOM Oo Ka Hadashay Booqashadii Aamina J. Maxamed Ee Muqdisho - Horseed Media • Somali News
September 13, 2021Somali News
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya oo war kasoo saaray booqashadii caasimada Muqdisho ee Ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid dhiirri-gelinaya horumarka joogtada ah ee ka-qaybgalka siyaasadda haweenka iyo sidoo kale doorashooyinka soo socda ee nabdoon.
Ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Aamina J. Maxamed ayaa maanta booqasho ku tagtay Soomaaliya iyada oo kaashaneysa baaqyada haweenka Soomaaliyeed ee ku aaddan in si buuxda oo siman looga qeybgeliyo siyaasadda, iyo in la muujiyo taageerada beesha caalamka doorashooyin nabdoon oo lagu kalsoonaan karo.
Ku-xigeenka Xoghayaha Guud waxay iftiimisay doorashooyinka baarlamaaniga ee dalka inay tahay fursad lagu sii xoojin karo horumarka laga sameeyay ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda, waxayna ku nuuxnuuxsatay in haweenka oo si buuxda uga mid noqda dhammaan qaybaha bulshada ay gacan ka geysan doonto adkeysiga, nabadda, iyo xasiloonida.
“Soomaaliya waxay guul ka gaartay doorashooyinkii u dambeeyay ee 2016/17 iyadoo boqolkiiba 24 kuraasta baarlamaanka ay haweenku buuxiyeen, waxaana ku rajo weynahay in dalku uu sii joogteyn doono arrintan iyadoo la ballaarinayo ka -qaybgalka haweenka xitaa si ka sii badan – hubinta in qoondada boqolkiiba 30 la buuxiyo. waa tallaabo muhiim ah oo muhiim u ah matalaad buuxda iyo bulsho loo dhan yahay. Saami -qeybsiga nabadda ma dhici doono haween la’aan, ”ayay tiri Marwo Amina Maxamed.
Ku-xigeenka Xog-hayaha Guud ayaa intii ay ku sugnayd Muqdisho la kulantay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed ‘Farmaajo.’ Waxay kaloo la kulantay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Golaha Wadatashiga Qaranka (NCC), oo xubnihiisa ay ka mid yihiin hoggaamiyeyaasha Dawladaha xubnaha ka ah Federaalka ee dalka waxaa kulamadaa la iskula soo qaaday arrimaha guud ee doorashooyinka.
Marwo Amina Maxamed waxay la kulantay odayaasha Soomaaliyeed iyo sidoo kale hoggaamiyeyaasha haweenka iyo u doodayaasha meelo kala duwan, hay’adaha maareynta doorashada iyo hoggaamiyeyaasha bulshada rayidka, waxayna u muujisay sida ay u garab -taagan tahay dadaalladooda ku aaddan sidii haweenku ay uga qayb qaadan lahaayeen ka qaybgalka ballaaran ee haweenka dalka dhinacyada siyaasadda iyo waliba nolosha dhaqaalaha.